Ifulethi elinamakamelo okulala angu-2 lezivakashi ezingu-4-5 elinengadi - I-Airbnb
Ifulethi elinamakamelo okulala angu-2 lezivakashi ezingu-4-5 elinengadi
Donji Stoliv, i-Montenegro
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Анна
U-Анна Ungumbungazi ovelele
Indlu yethu yezivakashi itholakala edolobhaneni elincane i-Stoliv. Uzohlala ngokunethezeka efulethini elithokomele elinezinto zonke ezidingekayo ukuze uhlale ngokunethezeka. Kunamakamelo angu-2, ikhishi negumbi lokuhlala negumbi lokugezela, kanye nethala elihle elinendawo yokubuka ulwandle. Indlu izungezwe ingadi lapho ungajabulela khona ikhofi lakho lasekuseni. Sine-BBQ zone, ifenisha yengadi. Sinikeza izivakashi zethu indawo yokupaka yamahhala.
Indlu yethu ethokomele ihlukaniswe yaba amafulethi ama-2 ahlukene. Kuzo zombili izinhlangothi kunamakamelo okulala ama-2, ikhishi, igumbi lokuhlala kanye negumbi lokugezela - kungukuhluka okuhle kweqembu lemindeni emi-2 yabantu abangu-4-6 esitezi ngasinye. Sikunikeza ingadi yethu elungiswe kahle enezimbali eziningi nezihlahla zezithelo, kanye nezindawo zokupaka mahhala izimoto ezi-2. Ulwandle "Markov Rt" lungamamitha angu-70 kuphela ukusuka endlini. Amanani ama-ambulela nama-shez-long aphansi kakhulu futhi ukungena emanzini kukhululekile ngisho nakuncane kakhulu. Amadolobha aseduze yiTivat neKotor (imizuzu eyi-15 ngemoto noma ngebhasi) Izitobhi zebhasi eduze kwendlu. Kunezitolo ezimbalwa ezincane namakhefi kanye nezindawo zokudlela ebangeni lokuhamba ngezinyawo ukusuka e-ou house
Indlu ethokomele, ehlukaniswe ngamafulethi ama-2 azimele, ngalinye linamakamelo okulala ama-2, ikhishi-igumbi lokuhlala nendawo yokugezela - ilungele inkampani yabantu abangu-4-6 esitezi esisodwa. Ingadi egcinwe kahle enezimbali nezihlahla zezithelo, indawo yokupaka. Ibanga eliya ebhishi le-Markov rt lingamamitha angu-70, ibhishi elinamanani athengekayo kanye nokungena kalula emanzini ngisho nokuncane kakhulu. Amadolobha aseduze yiTivat neKotor. Ibhasi liyama ngaphandle komuzi. Izindawo zokudlela kanye nezindawo zokucima ukoma, izitolo ezincane, izitebele zezithelo zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
IStoliv iyindawo ethokomele ye-EDEM e-Kotor Bay. Uma nje ulapha uzizwa sengathi ubuyela ekhaya ngemva kosuku lokusebenza kanzima futhi ufake iziliphu zakho ozithandayo. Yindawo enokuthula nenethezekile lapho abantu benomusa futhi bejabule. Amanani ezindaweni zokudlela nasezitolo anengqondo kakhulu
IStoliv iyindawo yasezulwini ethule, ethokomele ngasogwini lweBay of Kotor. Uma ufika lapha, uzozizwa sengathi ubuyele ekhaya ngemva komsebenzi onzima wosuku futhi ugqoke ama-slipper. Kunokuthula, ukunethezeka, abantu banomusa futhi bamukelekile. Amanani ezindaweni zokudlela kanye namathofi, okubalulekile, abusa ngentando yeningi kakhulu.
Sikhuluma isiNgisi, isiSerbia, isiRashiya
UАнна Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Donji Stoliv namaphethelo